eFiling Service Login Here >>
The due date for monthly payment of specific goods tax and commercial tax
The due date for quarterly return of commercial tax
The due date for annual return of commercial tax and income tax for the taxpayers except State Economics Enterprise
The due date for quarterly payment of income tax and quarterly return of specific goods tax
The due date for an annual return of commercial tax and income tax for State Economics Enterprises
- အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် လိုအပ်သည့်ပုံစံများနှင့် အခွန်ထမ်းပြည်သူများသိရှိစေရန် ထုတ်ဝေထားသည့် အခွန်နှင့်ပတ်သက်သည့် လက်ကမ်း စာစောင်များအား Forms and Publications Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
- အခွန်ထမ်းပြည်သူများမှ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ မေးမြန်းထားသည့် အခွန်နှင့် ပတ်သက်သည့် အမေးအဖြေများကို သိရှိလိုပါက Asked Question Link တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
- အခွန်နှင့် ပတ်သက်သည့် ထပ်မံသိရှိလိုသည့် အကြောင်းအရာများရှိပါက ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီး ဌာနရုံးချုပ် ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၀၅၃၃၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး ရန်ကုန် (အမှတ်-၅၉/၆၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်)ဖုန်း ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂ နှင့် မန္တလေး( ၆၅လမ်း၊ ၂၂x ၂၃လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်) ဖုန်း၀၂-၃၀၁၉၂ သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
On the occasion of 46th Anniversary of Internal Revenue Department, we would like to credit to every faithful tax payers that contribute toward the betterment of society and development of the country. We wish all of our distinguish tax payer to be healthy and greater successful achievement in your business.
New Products to provide guidance to taxpayers – Interpretation and Practice Statements
Practice Statement No. 1/2019
Interpretation Statement No. 1/2019
Interpretation Statement No. 2/2019
Interpretation Statement No. 3/2019